Yintoni eyenziwa ngoplastiki eyenziwa nguAnastasia Reshetova, intombi kaTimati: ifoto ngaphambi nangemva kokuhlinzwa kweplastiki
UAnastasia Reshetova ngumzekelo, inkwenkwezi ye-Insagram kunye nentombi kaRimati intombi. Kwiminyaka eyi-17, uNastia waba ngu-I-st Vice-Miss Russia-2014. Nangona into yokuba intombazana ngokwemvelo yinto enhle, ihlala isebenzisa izinto ezintsha kwi-cosmetology kunye namayeza eplastiki. Yintoni kanye, ifumanisa isayithi
Biography yeAnastasia Reshetova
U-Anastasia Reshetova wazalelwa ngo-1996, kwisixeko saseMoscow. U-Nastya wakhuliswa nguyise, umkhosi wezempi ngoqeqesho, uColonel. Xa yena nodadewabo omncinci beselula, abazali babo banquma ukuqhawula umtshato. Uyise wathatha amantombazana. Akazange azenzele iintombi zakhe: ukunyuka kweshedyuli, ukucoca nokupheka. Ndazama ukufaka kubo uthando lomyalelo, ukufundiswa ukukhokela indlu. Ulawulo olunzulu luye lwaziswa kubaphathi bee-suitors abavela xa abantwana bekhulile. Ngelishwa, uNastya akazange akwazi ukuseka ubudlelwane nonina.
Intombazana enhle ihlala isifisa ukuba ngumdlali wokudlala. Nangona esikolweni wayesebenzisa izixhobo zokubambisana, ukuya kwizifundo ezizodwa. U-Nastya akazange acinge nokuba ngumzekelo. Konke okwenzekile ngengozi. Ukufika emncintiswaneni wobuhle "Miss Universe" njengombukeli, ubuhle obuneminyaka eli-17 abuzange balindelwe kuyo yonke into yokuba uya kumenywa ekwakhiweni kwe "Miss Russia".
Emva kwesikolo, u-Anastasia wangena kwiYunivesithi yaseMoscow State, apho yagqiba khona ukufumanisa uqeqesho lwentatheli. Kodwa kwafuneka ndiyeke izifundo zam ngenxa yeshedyuli exakekile. Ngoku ufunda ngokungabikho, ufumana uqeqesho lomsebenzi waseburhulumenteni eMIEPP. Ukongeza kwimfundo eyisiseko, uRhehetova waya kwiSikolo seMoscow seRadio kunye neTelevishini. Iphupha lokuba ngumncedisi kwenye yeendlela ezinzulu zeRashiya iTV.
Iiprojekthi zezorhwebo kunye nencwadi yokuqala ye-Anastasia Reshetova
U-Anastasia wenza kakuhle njengomfazi oshishino ophumelelayo. Ngo-2016, wakhela ikliniki yakhe yobuhle - i-Anatomia Beauty Clinic. Le projekthi yaphumelela. Kwimibono yakhe kwi-Instafoto, intombazana inokwabelana ngezicwangciso zayo ezikude kule kliniki. Uhlala ekhangisa iinkonzo, uxela ngokucacileyo malunga neendlela ezizodwa okanye le nkqubo yobugcisa.
Kulo mfanekiso - u-Anastasia Reshetova kwi-salon yakhe
Kodwa ku-Anastasia akazange ayeke. Kungekudala, ngokuchanekileyo - entwasahlobo ka-2017, inkwenkwezi ye-Instagram yanikeza incwadi yakhe ethi "Namhlanje ndavusa enye". Amava omzekelo, i-blogger yobuhle kunye nomqeqeshi wempilo ayengento. Ukukhanya kubone iqoqo eliprintiweyo apho imodeli eyaziwayo yaseRashiya ikwabelana ngeengcebiso ngobuhle. Indlela yokutya ngokufanelekileyo, ukuzivocavoca, ubukele ubuhle besikhumba - kunokufumana impendulo kuyo yonke le mibuzo.
Kwi-photo-coach-coach u-Anastasia Reshetova
Ngaphantsi koNyaka omtsha, ekupheleni konyaka we-2017, u-Anastasia wavula e-Moscow beauty salon Inhype BeautyZone. Isebenzisa kuphela iindlela ezintsha, izinto kunye nezixhobo.
Kulo mfanekiso - u-Anastasia Reshetova kwi-salon yakhe yobuhle
U-Anastasia Reshetova - osebenzayo nge-Instagram yomsebenzisi. Intanethi yezonxibelelwano izisa umnotho omkhulu. Intombazana ihlala ihambisa iifoto zayo kwiphepha. Inani lababhalisi balo sele lifikelele kwizigidi eziyi-1.5. Kwiposi nganye yentengiso, ufumana ama-ruble ayi-100,000.
Yintoni eyenziwa ngoplastiki eyenziwa nguAnastasia Reshetova?
Ngoxa abalandeli beqaphela, apho iinkqubo zeplastiki zika-Anastasia zisebenzisayo, iingcali ezisemgangathweni yonyango lobugcisa zinika uvavanyo. Omnye wabo nguHayk Babayan. Wayehlolisisa iifoto zeAnastasia ngaphambi nangemva kwemisebenzi eyenziwa. Ugqirha wafika kwisigqibo sokuba iplastiki ikhona. Ukholelwa ukuba le ntombazana ayizange ichithe inkunkuma yezobugcisa, kodwa yamcebisa ukuba ayeke ngexesha. Impumlo. Inyaniso yokuba intombazana yatshintsha isimo sempumlo yakhe icace. Kwizithombe zokuqala, wayengekho mncinci kwaye akazange abukeke enhle kakhulu. Ngokweengcali, i-rhinoplasty ayizange iphazamise ubungakanani buso, ihlanganiswe ngokugqithiseleyo kunye neentekisi ezibukhali kwaye ngokubanzi ayizange yonakalise ukubonakala kwayo.
I-Rhinoplasty ayizange ichithe idatha yoluntu ye-Anastasia
Iilomo. Ugqirha we-plastiki ukholelwa ukuba i-Star Star iye yandisa imilomo kwaye oku kucacileyo. Baye baqonda ngokucacileyo ngakumbi, ukuchazwa kwabo kuguquliwe. Kodwa intombazana ayizange iwele imida. Izindebe ezilumkileyo zibukeka zingekho ngokwemvelo, kodwa ungasonakalisi umfanekiso jikelele. U-Anastasia ngokwakhe wavuma kubalandeli bakhe ukuba wenza ukunyuka komlomo. Kodwa wayedlulile kwixesha elidlulileyo ukulahla i-hyaluronic fillers. Ngoku, imodeli yamabango, imilomo yakhe iphinde ibuyele yendalo.
Iidama kunye neetekisi. U-Anastasia wayilungisa umgca wobuso bakhe. Kucacile ukuba loo mahloni angabalulekanga kuye ngohlobo lwendalo. Okokuqala wawagxotha izibonda ze-Bisha (ezi ziqubuthelo zentlanzi kwindawo yesigxina, zikhulisa izihloko zobuso). Abo bafuna ukwenza ubuso sele bekhululiwe kubo ngokuhlinzwa ngoplastiki. Kodwa oku akukuphela kwongenelelo. Inokwenzeka ukuba, wanika i-cheekbones nge-fillers nge-hyaluronic acid.
"Injengo yobuninzi." U-Anastasia wabelane kunye nabalandeli ulwazi olwenza rhoqo injections yobuhle. Ngokwam, uxhasa ulusu lolutsha ngoncedo lwama-mesotherapy. Ingundoqo yenkqubo - ngoncedo lweenjini, izinto ezifunekayo zezinto eziphilayo zenziwa kwi-kliniki. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba ukuqaphela kwakubonwe lukhangiso lweklinikhi yakhe yobuhle.
Mammoplasty. Ngaphandle kwayo, kwakhona, akuzange kwenziwe. Umthamo wokugqithisa ukwandiswa kakhulu ngokuthelekiswa neefom ezibonakaliswa kwiifoto zokuqala zikaRussia waseRashiya. Ngoku le ntombazana isoloko imkholisa ama-fan ngemifanekiso ene-frank ene-neckline enzulu.
Ngaphambi nangemva kwe-mammoplasty
Gluteoplasty. Ukongeza kwibele, i-Reshetova izifakelo ezifakwe kwiindawo. Oku kubonakaliswa ngamathanga amakhulu kunye "neesilwanyana zaseBrazil", ezizenzeke ngokupheleleyo kwi-asthenic yazo. Ukongezelela, ukuguquka okungaqhelekanga okuvela kwisiseko se-back to the butscks. Kufuneka kuqatshelwe ukuba ibhinti ye-Anastasia iinqumle zingaphezulu kwe-100 cm, kuba umzekelo "le yardage" ayiqhelekanga. Kodwa kwimvelaphi yayo inqeni ibonakala njenge-aspen.
Phambi kwe gluteoplasty:
Emva kwe gluteoplasty:
UFilip Kirkorov uxelele ukuba ngubani ufana lukaSergei Lazarev
Indlela yokucela ukwanda kwimivuzo
I-Eastern Bazaar Cake
Inkukhu ihluma ngamagqabi
Izicathulo eziphathekayo ekwindla-ebusika 2013/14